पाँच सयको नक्कली नोट भेटियो » खबरहरुको एउटै केन्द्र
पाँच सयको नक्कली नोट भेटियो
शुक्रबार, बैशाख १५, २०७४ ०८:५२ मा प्रकाशित !
दमक, वैशाख १५ गते
झापाको दमकमा नेपाली रु पाँच सयको नक्कली नोट भेटिएको छ । दमकस्थित ट्याक्सी स्टेन्डका एकजना मजदुरले फेला पारेको नेपाली रु पाँच सयको नोट नक्कली भेटिएको हो । मजदुर अगुवा दधिराम खतिवडालाई चार दिनअघि एक यात्रुले दिएको ट्याक्सीको भाडा रुपैयाँको त्यस नेपाली नोट नक्कली भेटिएको बताइएको छ । दधिरामले झट्ट हेर्दा सक्कली झँै देखिने त्यस नोट यातायात कार्यालय विर्तामोडमा कर तिर्दा मात्र त्यो नोट नक्कली प्रमाणित भएको बताउनुभयो ।
उहाँले कर बुझाउँदा मात्र त्यो नोट नक्कली भएको भन्दै फर्काइ दिएपछि थाहा पाएको बताउनुभयो । त्यस नोटलाई उहाँले सुरक्षित राख्नुभएको छ । दमकमा पाँचसय दरका नेपाली नक्कली नेपाली नोट भित्रिएको हुनसक्ने उहाँले आशङ्का गर्नुभयो ।
गभर्नर युवराज खतिवडाको हस्ताक्षर रहेको ५०० घ २०– ४७६७९९ उल्लेख भएको नक्कली नोट सक्कलीको तुलनामा केही छोटो र पातलो भएको पाइएको छ । केहि दिन अघि मात्र पोखरालगायत सहरमा नक्कली नेपाली नोट भेटिएको र त्यसै गिरोहले पूर्वका बजारसम्म पनि त्यस्ता नोट भित्र्याएको हुनसक्ने अनुमान स्थानीयवासीको छ ।
500 nrs fake
nakkali 500 rupaiya
nepali fake paisa 500
nepali nakkali paisa
PREVIOUS POST Previous post: सर्वदलीय बैठक आज अपरान्ह
NEXT POST Next post: एक वर्ष कर्मचारीको पदपूर्ति रोक्ने
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शुक्रबार, बैशाख १५, २०७४ ०८:५२
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शुक्रबार, बैशाख १५, २०७४ ०८:५२
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शुक्रबार, बैशाख १५, २०७४ ०८:५२
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शुक्रबार, बैशाख १५, २०७४ ०८:५२
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शुक्रबार, बैशाख १५, २०७४ ०८:५२